Inyanga kuzimpawu zobuntu beTaurus - Ukuhambisana
Main Ukuhambisana Inyanga kuzimpawu zobuntu beTaurus
INyanga eTaurus ithuthukisa izici ezijwayelekile zalesi sibonakaliso se-zodiac, ikakhulukazi ezindabeni zenhliziyo. Njengalokhu, isifiso esijulile salomdabu wukuthuthuka ngokwazi empilweni, ngokwazi okukhulu ngendima yabo ngqo abazoyibamba kulo mhlaba nakubudlelwano babo.
yisiphi isibonakaliso mashi 19
Lo mdabu ufuna ukufeza izinto iningi lethu elizifunayo futhi ezingazitholi, ukuzinza, ukuphepha, isiqiniseko sokuthi izinselelo ezinkulu zokuphila ngeke zivele futhi zichithe konke umuntu akulwele.
Inyanga eTaurus ngamafuphi:
Isitayela: Inethezekile futhi igcwele amandla
Izimfanelo eziphezulu: Unomusa, amasu nothando
Izinselelo: Ukuzitika ngokweqile, inqubo ejwayelekile kanye nengqondo eqinile
Iseluleko: Izwa okwengeziwe empilweni nomsele okunethezekile
Osaziwayo: F. Scott Fitzgerald, Greta Garbo, William Shakespeare, Christina Aguilera.
Ngaphezu kwalokho, umuntu waseTaurus Moon ubamba izimiso zakhe ngokuhlonishwa okukhulu, futhi ngeke anikele ngazo kulutho emhlabeni. Ukwethembeka nesithunzi kungezinye zeziqondiso ezimbalwa ezilandelwa yilaba bantu encwadini.
Abantu baseTaurus Moon bafuna inala
Labo abazalwa ngaphakathi kwemikhawulo yemilingo yeNyanga eTaurus ngeke babe nezinkinga ngokuya ngengcebo yomuntu siqu. Izinsizakusebenza zabo zibonakala ngathi azisoze zaphela, futhi lapho nje kubonakala sengathi bangaphelelwa yimali, kwenzeka njalo ukuthi kukhona okugcwalisa isikhwama sabo.
Kuphakathi kokuthi bakhokhelwa iphrojekthi baze bakhohlwa nokuyiqedela, noma ithuba lenhlanhla lithola inzuzo enkulu. Kunoma ikuphi, i-Universe kubonakala sengathi iceba ukucebisa bona, noma okungenani indlela yokuphila engenazinkathazo yamaMoon Taurean ethu.
Futhi akufani nokuthi abayisebenzisi imali, ngoba bayakwenza, futhi ngaphezulu kwalokho, banomusa kakhulu ekuqaliseni.
Le ndlela abanenhlanhla ngayo futhi ingaba ngumphumela wokucabanga kwabo abaziphethe kahle futhi abazinzile, ngoba, yize bengenakho ukuthanda izinto zenhliziyo, banokuqonda kwezifiso zabo kanye nezinto abazifunayo.
Ngakho-ke, ngeke bathole izinto abangazidingi ngempela, kodwa kunalokho bazogxila ekunethezeka, ekufezeni izifiso zabo eziyisisekelo, kanye nezidingo zendlela yokuphila engenazinkathazo.
Bayazi ukuthi ukuvikeleka kumbono wezinto ezibonakalayo akukuhle kuphela, kepha kuyalulekwa kunoma ngubani, kungaba owesilisa noma owesifazane, iTaurus noma esinye isibonakaliso, isibonelo.
Laba bantu bathandana njengoba beza, kuthinta njengenye yamathalenta abo amahle kakhulu. Ngeke uphinde ufune ukubuyela kumuntu wakho wakudala ngemuva kokudlula esimisweni sokuncinza nalaba bomdabu.
Ngempela, uma kukhulunywa ngokuvusa isasasa lakho, ukuqabula nokugona kuyinto encane abangayenza, futhi usikholwe, awusoze wadumazeka kulokhu.
Futhi, ngoba bafuna ukuba nobudlelwano obuzinzile nobude isikhathi eside ngaphezu kwakho konke, izibopho zabo zothando zizohlala ziqala ngesisekelo sokuhlala unomphela engqondweni, hhayi eyokuzijabulisa kobusuku obubodwa.
Amathemba esikhathi esizayo, umndeni ongahle ube khona, izingane, laba bantu abangaphansi kwethonya leNyanga, banezinhlelo zabo ezihleliwe, futhi balinde umlingani ophelele ukuthi azifeze zonke.
Banakekele, banomusa kakhulu futhi banomusa, banothando futhi banothando olweqile. Awusoze wafuna okunye, ngoba bazokwenza isiqiniseko sokuthi ngeke kudingeke. Bazoniphana, basungule ubudlelwano obuzinzile nobuphephile nobabili ukuze niphumelele.
Kuyama futhi kuyesabeka
AmaTaurean, njengoba sonke sazi, uhlobo lwabafana abafuna ukusungula imindeni yabo, bathole amakhaya abo, futhi bathathe umhlalaphansi lapho impilo yabo yonke.
Induduzo, inqubo ejwayelekile, indlela yokuphila engenazinkathazo, azikho izinselelo futhi akukho bhizinisi eliyingozi, lezi yizimpawu ezitshengisa ukuthi owomdabu uthonywe yiNyanga eTaurus.
Abafuni ukuhlanganisa lutho nanoma yini equkethe igama elithi 'shintsha' nelithi 'okusha'. Akukho okuhle okwake kwavela ngokulandela lezo zinto, okungenani hhayi ekucabangeni kwabo.
Bathanda kakhulu ukuphila impilo ejwayelekile, kangangokuthi bangaze balinge ukwenqaba ngokuphelele kusukela ekuqaleni noma imuphi umqondo ongahambisani nawo ovelayo, noma ngabe kunamiphi imiphumela.
Laba bantu bomdabu abavamile ukuzitshela okuthile, futhi uma bekwenza, mhlawumbe kuyinto asebehlale isikhathi eside ngayo, noma abayihlaziye ngokujulile.
Ngoba abafuni ukuthatha izingozi ezingadingekile, amaMoon Taureans azocabangisisa ngezinto ngaphambi kokuzibophezela enkambweni yesenzo.
UFortune angabathanda abanesibindi, kepha kuthiwani uma bengafinyelela into efanayo umuntu onesibindi angayenza, kuphela ukuthi basebenzise amasu nezinhlelo ezicatshangelwe kahle? Ngokusobala, kufanele bakwenze lokho, ngoba kunezingozi ezimbalwa ezihilelekile, futhi ne-endgame iyafana.
Laba bantu bomdabu bayisigejane esinobungane futhi abakhulumayo, abangakaze bakhishwe ephathini ngenxa yokudina wonke umuntu okhona. Bayazi ukuzijabulisa, kanye nokuletha i-pragmatism eqabula edingeka kakhulu kuzo zonke izingxoxo.
Ngokuphathelene nobuntu babo nobumnene babo, amaMoon Taurean ayabekezela, azolile, futhi awasoze asondela esimweni ngendlela yokuxhamazela futhi engaxhamazeli.
Esikhundleni salokho, bazozama ukusicubungula kahle isimo, babheke imiphumela, imiphumela, futhi emva kwalokho kuphela lapho bangazibophezela enkambweni yesenzo.
Ngakho-ke, ungathembela kubo ukuthi bazokusiza nganoma yini oyidingayo, futhi ngaphandle kokukhathazeka ukuthi bazokhokha ngebheyili lapho kuvela uphawu lokuqala lwenkinga.
Iphutha labo elikhulu ukuthambekela kokujwayela kakhulu ukuphila impilo ethokomele, ngakho-ke ukuhlehlisa izinto kungalandela, ngendlela enkulu.
Bangakujwayela impilo ejwayelekile, lapho kungenzeki lutho olusha khona, ukuze bakhohlwe ngisho nokusemqoka.
Futhi, ngenxa yesidingo sokujabulisa izinzwa zabo, bangazitika ngokuzitika ngokweqile isikhathi eside ngaphambi kokuba babone ukuthi baphila impilo yobubi, futhi imvamisa, lesi sambulo siza ngezindleko zeminyaka embalwa impilo echithwe ngokweqile kuzo zonke izinhlobo.
Bangabuye baphenduke ama-freaks amancane, uma kwenzeka efika kuleso sigaba ebudlelwaneni, uma umlingani engenzi lutho ngalokhu ngesikhathi esifanele.
Bangaba futhi abahluphayo nabahle futhi uma benesibindi sokuphazamisa indlela yabo yokuphila esungulwe kahle. Uma kwenzeka kufika izibhakela, bazoba nolaka olukhulu, ngoba ngandlela thile ukwazile ukuphazamisa ukuthula nozinzo abasebenze kanzima ukukuthola.
Ukuzitika ngokweqile, inqubo ejwayelekile, umqondo oqinile, konke lokhu kudla amandla abo, futhi lokhu kungalungiswa kuphela ngokuzithuthukisa, ukuzazi. Badinga ukuguquguquka futhi bahluke emicabangweni, kepha bangakuthola kunzima kakhulu.
Inyanga ephelele eTaurus: Kusho Ukuthini Futhi Ungayisebenzisa Kanjani Inzuzo
Inyanga Entsha eTaurus: Kusho Ukuthini Futhi Ungayisebenzisa Kanjani Amandla Akhe
I-Taurus Horoscope Nezici - Isibonakaliso Esimangalisayo Se-Zodiac, Esihle Futhi Esiqotho
Owesifazane wase-Aries Embhedeni: Ongakulindela Nokwenza Uthando
Izici Eziyinhloko Zesibonakaliso Sezinkuni Zodiac Chinese Wood
ukuheha kanjani owesifazane onomdlavuza
luyini uphawu lwe-zodiac lwamashi 11
lapho indoda ye-taurus ihlukana nawe
indlela yokuhlaba umxhwele indoda eyi-aries
inyanga endlini yesi-6
uphawu lwe-zodiac lwangomeyi 16